Soomaaliya iyo Qatar oo kala saxiixday heshiis ku kacaya 200 milyan dollar (Cod + Sawirro) - Caasimada Online
Home Warar Soomaaliya iyo Qatar oo kala saxiixday heshiis ku kacaya 200 milyan dollar...
Soomaaliya iyo Qatar oo kala saxiixday heshiis ku kacaya 200 milyan dollar (Cod + Sawirro)
Muqdisho (Caasimadda Online) – Wafddi ka socda Dowladda Qadar ee maanta soo gaaray Magaalada Muqdisho ayaa ballan qaaday mashaariic kala duwan oo ay ka fulin doonaan Soomaaliya.
Wafddigan ayaa waxaa ay heshiis kala saxiixdeen Dowladda Soomaaliya waxaana ay dowladda Qadar ballan qaadday $200 Milyan oo doollarka Mareykanka ah taas oo ay dowladda Soomaaliya u adeegsan doonto mashaarciida dowladda.
Waddigan oo ka kooban 5 xubnood ayaa waxaa ay dib ugu laabanayaan dalkooda kaddib heshiiska ay la galeen Dowladda Soomaaliya.
Qadar waa dalka ay go’doomiyeen afarta dal ee Khaliijka Carabta ugu tunka weyn,waxaan Soomaaliya ay ka id tahay Waddamada khilaafkaas dhex dhexaadka ka noqday.
Lacagta ay ballan qaadday Dowladda Qadar ayey sheegeen in uu bixinayo Sanduuqa Caalamiga ah ee horumarinta dowladda Qadar.
Codka Khaliifa Bin Jaasim
Codka Jamaal Maxamed Xasan